Raha tsy fantatrao izay atao hoe WordPress Child Theme dia ... | Martech Zone
Manova ny lohahevitra WordPress tsy mety ianao.
Niara-niasa tamin'ny mpanjifa am-polony izahay ary nanangana tranokala WordPress an-jatony nandritra ny taona maro. Tsy ny asantsika dia ny famoronana tranokala WordPress, fa tsy maintsy ataontsika ho an'ny mpanjifa maro izany. Ny mpanjifa dia tsy tonga mampiasa tranonkala WordPress matetika. Manantona anay matetika izy ireo mba hanampy amin'ny fanatsarana ny tranonkalany ho an'ny fikarohana, sosialy ary fiovam-po.
Matetika isika no miditra amin'ny tranokala hanatsarana modely na hanamboatra modely pejy fitobiana vaovao, ary mahita zavatra mahatsiravina izahay. Matetika izahay mahita lohahevitra voavolavola tsara tohana tsara izay novidiana ho fototry ny tranokala ary avy eo novaovin'ny masoivohon'ny mpanjifa teo aloha.
Ny fanovana lohahevitra lehibe dia fanao mahatsiravina ary mila mijanona. Nivoatra ny WordPress Lohahevitra momba ny ankizy hahafahan'ny masoivoho manamboatra lohahevitra iray nefa tsy mikasika ny kaody fototra. Araka ny WordPress:
Ny lohahevitry ny ankizy dia lohahevitra iray mandova ny fampiasa sy ny fanaingoana ny lohahevitra hafa, antsoina hoe lohahevitra ho an'ny ray aman-dreny. Lohahevitry ny ankizy no fomba fanolorana fanovana lohahevitra efa misy.
Rehefa mihabetsaka ny miditra amin'ny lohahevitra dia amidy matetika ny lohahevitra ary havaozina matetika hikarakarana ny bibikely na ny lavaka fiarovana. Ny mpamorona lohahevitra sasany aza dia manohy manatsara ny endri-javatra amin'ny lohaheviny rehefa mandeha ny fotoana na manohana ny lohahevitra amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny kinova WordPress. Mividy ny ankamaroan'ny lohahevitray izahay Themeforest. Ho hitanao fa amidy am-polony maro ny lohahevitra ambony ao amin'ny Themeforest ary manana sampan-draharaha feno famolavolana manohana azy ireo hatrany.
Rehefa miara-miasa amin'ny mpanjifa izahay dia asainay mandinika ny lohahevitra izy ireo hahitana ireo fiasa sy fampiasa tian'izy ireo. Izahay dia manome antoka fa mamaly amin'ny lohahevitra finday ny lohahevitra ary manana fihoaram-pefy lehibe amin'ny layout sy ny kaody fohy ho fanaingoana. Izahay avy eo manome alalana ary misintona ilay lohahevitra. Ny ankamaroan'ireo lohahevitra ireo dia efa voaisy fonosana miaraka a Child Theme. Mametraka ny roa Child Theme ary Lohahevitry ny ray aman-dreny, ary avy eo mampihetsika ny Child Theme mamela anao hiasa ao anatin'ny lohahevitry ny Ankizy.
Manamboatra ny lohahevitry ny ankizy
Ireo lohahevitra momba ny ankizy dia mazàna voaangona miaraka amin'ilay lohahevitra ho an'ny ray aman-dreny ary omena anarana araka ilay lohahevitra miaraka amin'i Child eo. Raha ny lohahevitro dia Avada, ny Child Theme dia matetika antsoina hoe Avada Child ary voarakitra ao amin'ny avada-zaza go foldara. Tsy izany no fivoriambe fanomezana anarana tsara indrindra, noho izany dia nomenay anarana amin'ny rakitra style.css ny anarana, omeo anarana ny folder aorian'ny mpanjifa, ary avy eo ampidiro ny pikantsary ny tranonkala farany sy namboarina. Izahay koa manamboatra ny antsipirian'ny takelaka style mba hahafahan'ny mpanjifa mamantatra hoe iza no nanamboatra azy amin'ny ho avy.
Raha misy Child Theme tsy tafiditra, mbola afaka mamorona iray ianao. Ohatra iray amin'izany ny Lohatenin'ny Ankizy novolavolainay ho an'ny fahafahanay misafidy. Izahay no nanome ny lohahevitra Highbridge 2018 taorinan'ny tranokalanay sy ny taona nampiharana azy ary napetraka tao anaty fampirimana ilay lohahevitra momba ny zaza iray-valo. Ny CSS styleheet dia nohavaozina tamin'ny fampahalalana anay:
/ * Anaran'ny lohahevitra: Highbridge Famaritana 2018: Lohahevitry ny ankizy ho an'ny Highbridge mifototra amin'ny lohatenin'ny mpanoratra Avada: Highbridge
Mpanoratra URI: https://highbridgeconsultants.com Template: Avada Version: 1.0.0 Text Domain: Avada */
Ao anatin'ny ny Child Theme, ho hitanao ny fiankinan-doha amin'ny lohahevitry ny ray aman-dreny fantatra amin'ny hoe Endrika.
Ankoatry ny fanovana CSS sasany, ny rakitra modely voalohany tianay novaina dia ny footer. Mba hanaovana izany, dia nadikanay ny rakitra footer.php avy amin'ilay lohahevitry ny ray aman-dreny ary avy eo dia nadikanay tao amin'ny iray-valo go foldara. Avy eo izahay dia nanitsy ny rakitra footer.php niaraka tamin'ny fanaonay ary ny tranokala no nandray izany.
Ahoana ny fomba fiasan'ny lohahevitra ho an'ny ankizy
Raha misy rakitra ao amin'ny Child Theme ary ny lohahevitra ho an'ny ray aman-dreny, ny rakitra ny Theme ho an'ny ankizy dia hampiasaina. Ny maningana dia functions.php, izay hampiasa ny kaody amin'ny lohahevitra roa. Ny lohahevitra momba ny ankizy dia vahaolana mamirapiratra amin'ny olana sarotra be. Ny fanovana ireo rakitra lohahevitra fototra dia tsia ary tsy tokony eken'ny mpanjifa.
Raha mitady maso ivoho hamorona tranokala WordPress ho anao ianao dia angataho izy ireo hampihatra ny Lohatenin'ny Ankizy. Raha tsy fantatr'izy ireo izay lazainao dia mitadiava masoivoho vaovao.
Ny lohahevitra momba ny ankizy dia manakiana
Nanakarama masoivoho ianao hanangana tranokala ho anao ary nampihatra lohahevitra ray aman-dreny tohana tsara izy ireo ary lohahevitra namboarina ho an'ny ankizy. Aorian'ny famoahana ny tranokala ary vitanao ny fifanarahana, WordPress dia mamoaka fanavaozam-baovao maika izay manitsy ny lavaka fiarovana. Manavao WordPress ianao ary vaky na banga ny tranokalanao izao.
Raha nanitsy ny masoivohonao Lohahevitry ny ray aman-dreny, ho very ianao. Na dia nahita Lohatenin'ny ray aman-dreny nohavaozina aza ianao, dia mila mampidina azy io ary manafoana ireo fanovana kaody mba hanandramana hamantatra izay fanitsiana manamboatra ilay olana. Saingy satria nanao asa tsara ny masoivohonao ary nampivelatra a Child Theme, misintona ny nohavaozina ianao Lohahevitry ny ray aman-dreny ary apetaho amin'ny kaonty fampiantranoanao. Mamelombelona ny pejy ary mandeha daholo ny zava-drehetra.
Fampahafantarana: Mampiasa ny Themeforest rohy mpiara-miasa ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: avadalohahevitry ny zazalohahevitra ho an'ny ray aman-drenythemeforestlohahevitry ny ankizy wordpresslohahevitra ray aman-dreny wordpresslohahevitra wordpress